गुल्मीकी संगिता छोरा सहित कहाँ गएकी होलिन् ? श्रीमान् मिडियामा आएर सन्तोष देउजासँग यस्ता कुरा खोले - Gulminews
२०७८ कार्तिक १३, ०३:३४
एकै बर्ष एउटै गाउँमा जन्मे, गाउँकै तल माथी घर, एउटै स्कुल मात्र हैन एउटै कक्षामा पढे । पढ्दै गर्दा प्रेममा परे, परिवारले नदिएपछी भागेर बिहे गरे । श्रीमान भियतनाममा सेफको रुपमा कार्यरत थिए, श्रीमती बुटवलमा आफ्नै सानीमाको घरमा बस्दै आएका थिईन् । श्रीमान्को कमाई राम्रै थियो, श्रीमती छोरालाई राम्रै स्कुल पढाउने भनेर बुटवलमा खुशी साथ बसेकी थिईन् । श्रीमान् बिदेशबाट फर्केको केही दिनमै श्रीमती एकाएक हराईन् ।
पर्सिपल्ट उनको आफ्नै बहिनीको बिहे पनि थियो, २ दिन पछी रहेको आफ्नै बहिनीको बिहे पनि किन कुरिनन् होला उनले ?
हेरौ कपुरबोटका संचालक सन्तोष देउजासँग उनका श्रीमानले गरेको कुराकानी:
रुपन्देहीमा एक ३१ वर्षीया महिला आफ्नो ९ वर्षीय छोरासहित बेपत्ता भएकी छन् । असोज २२ गतेदेखि वेपत्ता उनी घर र माइतको सम्पर्कमा नआएपछि खोजीका लागि आफन्तले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा प्रहरीलाई अनुरोध गरेको छ ।